Ndị dike Exo bụ RPG nwere ọgụ na-atọ ọchị na akụkọ na-atọ ọchị | Gam akporosis
Egwuregwu Line Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-ebugharị Egwuregwu Egwuregwu, Egwuregwu na Ọdịdị Mara Mma
Heroes Exo bụ egwuregwu ewepụtara na nso nso a site na Line Games, RPG zuru ezu nke nwere freemium ahụ na nke ahụ na-enye nnukwu ísì ụtọ nke na-ewe anyị site na otu n'ime egwuregwu ndị nwere njirimara kachasị mma; na ọgụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ par.
Ntughari dabeere na agha maka egwuregwu na-egwu egwu nke anyị ga-enwe ike na-agafe ụwa dị ka Final Fantasy wee banye n'ime ọgụ na akụkọ ọ bụla na-echere anyị. Egwuregwu nke ọbụlagodi na ha arụ ọrụ iji weta ihe dị iche na nke anyị jiri. Gaa maka ya.
1 Mepee ụwa maka gị ka ị were nyocha wee chọpụta ya
2 Nyochaa ụwa jupụtara na akụ na Exo Heroes
3 RPG na-achị ọchị
Mepee ụwa maka gị ka ị were nyocha wee chọpụta ya
Anyị nwere agwa anyị Ndị dike Exo na-agagharị na maapụ ekele maka njikwa anyị na-eme ya na mkpisi njikwa. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịdọpụta onye ndu na-akpaghị aka mgbe niile, lee, ha na-ahapụ anyị ntakịrị njikwa iji nye anyị ahụmịhe egwuregwu egwuregwu ọzọ. Dị ka anyị kwuru, ọ bụ nnọọ yiri Final Fantasy ebe ị na-eje ije na ị na-enweghị usoro na-ezute ndị iro.
Anyị njem nwere njedebe na anyị na-eche ihu a egwuregwu nke nwere oké akụkọ n'azụ ya; dị ka webcomic ahụ Hero Cantare na ụnyaahụ anyị gafere nyocha nakwa na o nwekwara nke ya ka anyị nwee obi ụtọ. Na Exo Heroes anyị kwesịrị ịchọ 'Exestruk', mma agha furu efu nke eze ukwu na nkọcha nke dragọn oge ochie.
Anyị ga-eche ihu imegide ike nile nke ihe ọjọọ nke ahụ na-etinye udo na kọntinenti Exos. Anyị na-eche ihu egwuregwu nke ọ dị oké mkpa na anyị ga-etinye akụkọ ahụ, mana n'ezie, ọ bụrụ na ọ bụghị n'asụsụ Spanish, mgbe ahụ isi ike. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dịghị ihe ngọpụ ka mma karịa ịmalite ịmụ asụsụ Bekee na egwuregwu ndị a niile dị ebube anyị nwere na ekwentị anyị.
Nyochaa ụwa jupụtara na akụ na Exo Heroes
Ọ bụrụ na ọ masịrị anyị Ka anyi bido na nnwere onwe inyocha uwa dum mepere emepeAnyị hụkwara ọgụ a n'anya. Na-atụgharị, na-eme finery na ụdị nile nke cinematics, visual mmetụta na na-atọkwa agwa imewe nwere ike hụrụ n'ụzọ zuru oke na ndị oge nke n'aka dabeere ọgụ; enweghị Na narị mkpụrụ obi ozugbo na-eme ihe, ma ọ bụ nnọọ ahụmahụ.
Lee ọgụ na-aga maka ụfọdụ runes nke na-egosi usoro nke okwute, akwụkwọ na mkpa nakwa na anyị ga-amata otu esi ejikwa iji merie ndị iro na-eji ụdị ọgụ. Ihe odide anyị jupụtara na nkà na ka anyị na-aga n'ihu, anyị ga-enwe obi ụtọ na ihe ngosi niile emere na ihuenyo.
Anyị nwere ihe karịrị Ndị dike 200 na-anakọta, ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị egwuregwu RPG nke iji chịkọta ndị kachasị mma, ị nọ na chi taa. Mana enwere ihe dị na akụkọ ntolite na mmalite nke egwuregwu ndị masịrị anyị nke ukwuu ma ọ bụ nkwenye onwe ma ọ bụ ịkwa emo dị na omume niile.
RPG na-achị ọchị
Dị ka RPGs kachasị mma, Ndị dike Exo nwere mmetụ ọchị nke na-ejisi ike imebi eriri nkịtị n'ụdị egwuregwu a. Nke ahụ bụ, anyị ahụla onwe anyị n'ihu zeppelin nke anyị tinyere aha ya ma anyị ga-efega ya. Ọfọn, na mberede atụmatụ ahụ mebiri ma anyị na zeppelin anyị dị egwu na-ezute n'ala mgbe ọdịda ọdịda ahụ gasịrị. Ya mere, a ga - enwe ọtụtụ oge ebe ndị isi agwa ga-ada, ma mee mmejọ ụmụaka. Da nkịtị nke na-enye ya mmadụ ya.
Ọhụhụ bụ nke kachasị mma na ọkwa a na-ahụ anya na ọnụ ọgụgụ gigabytes na i nwere ibudata iji malite egwuregwu; site n'egwuregwu mini cargo ọ dịghị onye na-aghọta ya. Edere ihe odide ahụ nke ọma ma nwee ọtụtụ nkọwa. Ọnọdụ ndị anyị na-agagharị na-enwe nnukwu onyinye ha na ndị na-alụ ọgụ na-asọpụrụ ndị cinematics ndị anyị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe nkiri eserese. Ọ bụ eziokwu na enwere mmejọ na mmekọrịta nke ụda olu ahụ, na oge ụfọdụ na nkuzi ahụ ma ọ bụrụ na anyị agbaa mkparịta ụka ahụ, ha ga-arapara mgbe anyị banyere ndị ọzọ. Ma ọ bụghị, iri.
Ndị dike ga-abịa gam akporo chọrọ ịbụ otu n'ime RPGs kacha kpachara anya nke oge na nke ị ga - enwe ọtụtụ akụkọ na ihe odide iji zute. Have nwere ya n'efu na Storelọ Ahịa Play, yabụ na-ewe oge iji wụnye ya.
Mmetụta ihu ọchị ya, akụkọ azụ, ọgụ, na njirimara agwa ya so na ndị kachasị mma.
Omuma mara mma na imewe gburugburu ebe obibi
Ọgụ bụ ihe kasị mma nke ọkwa na ezigbo cinematics
Uwa meghere ka inyocha
Akụkọ na ndabere na na kemmeochi aka
Desynchronization na mkparịta ụka nke olu
Ndị dike Exos
Developer: Egwuregwu LINE
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu Line Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-ebugharị Egwuregwu Egwuregwu, Egwuregwu na Ọdịdị Mara Mma
Agha Divas bụ RPG nwere mmetụ Asia ahụ, na-enweghị porridge yana ọgụ na-adabere na ya